Vaovao - Jilin Yuantong Mining Co., Ltd. dia nandray anjara tamin'ny Fihaonamben'ny Indostrian'ny Mineraly tsy metaly tamin'ny taona 2020
Ny "Fihaonamben'ny indostria mineraly tsy metaly metaly sy fampiratiana" 2020 izay natolotry ny fikambanan'ny indostria mineraly tsy metaly dia natao tao Zhengzhou, Henan ny 11 hatramin'ny 12 novambra. Tamin'ny fanasan'ny Fikambanan'ny Indostria momba ny harena ankibon'ny tany China dia nanatrika ity fihaonambe ity ny tale jeneraly lefitra ny orinasa Zhang Xiangting ary ny mpitantana ny faritra Ma Xiaojie. Ity fihaonambe ity dia notontosaina tamin'ny fotoana iray lehibe niady tamin'ny firenena nanoloana ilay valanaretina satro-boninahitra vaovao. Miaraka amin'ny lohahevitra hoe "mamorona endrika orinasa vaovao ary miditra amin'ny tsingerina roa", namintina ny traikefa sy ny zava-bitan'ny indostrian'ny fitrandrahana tsy metaly ny fireneko, ary niresaka momba ny fampiroboroboana sy fametrahana toerana stratejika ny fireneko ho avy, ary koa ny fahombiazana amin'ny fifanoherana lehibe sy olana goavana eo amin'ny sehatry ny indostria. Manokana, ny toe-java-misy ankehitriny sy ny firoboroboan'ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany tsy metaly ambanin'ny valan'aretina, natambatra tamin'ny toe-karena teto amin'ny fireneko nanomboka tamin'ny valan'aretina, nanao fikarohana lalina sy fifanakalozan-kevitra ary nanolotra ny fandresen'ny "ary manaova fandraisana anjara vaovao sy lehibe kokoa amin'ny fanatanterahana tanjona stratejika nasionaly.
Ireo mpitarika ao amin'ny Minisiteran'ny Indostria sy ny Teknoloolojian'ny fampahalalana, ny minisiteran'ny Harena voajanahary, ny fitantanan-draharaham-panjakana momba ny hetra ary ny federasiona fambolena ao Sina dia nanao kabary ifotony. Nandritra ny fihaonana, 18 ny singa avy amin'ny sehatra mifandraika manerana ny firenena nanao kabary sy fifanakalozana tao amin'ny forum. Zhang Xiangting, lefitra jeneraly lefitry ny orinasanay, dia nanao tatitra mitondra ny lohateny hoe "Fampivoarana ny vokatra diatomita vaovao sy ny fivoaran'ny fampiharana amin'ny sehatra mifandraika" amin'ny orinasanay, ary nametraka hevitra vaovao sy fomba vaovao an'ny orinasanay amin'ity sehatra ity. Ho fankasitrahana ny tombotsoan'ny indostrian'ny orinasanay sy ny toerany miavaka amin'ny fanodinana lalina ny diatomite, dia noderain'ny vahiny izy.
Nanambara koa ireo nandresy tamin'ny "2020 China Non-metallic Mineral Science and Technology Award" ary nanome azy ireo izany.
Notarihin'i Pan Donghui, filohan'ny Fikambanan'ny harena ankibon'ny tany tsy metaly China ny fihaonambe. Ny solontena mpikambana ao amin'ny indostria mifandraika amin'ny fitrandrahana tsy metaly toa ny University of Mining and Technology, China Academy of Geological Science, ary ny vahiny avy amin'ny andrim-pikarohana siantifika dia nanatrika ny fihaonambe.